Isinyathelo esihlose ukonga imali kuHulumeni wesifundazwe - Bayede News
Home » Isinyathelo esihlose ukonga imali kuHulumeni wesifundazwe
Isithombe: nguSibonelo Ngcobo
UMnyango Wemisebenzi KaHulumeni KwaZulu-Natal usezinhlelweni zokwakha inxanxathela yamahhovisi eminyango eyahlukene ngenhloso yokuncipisa izindleko.
Lokhu kudalulelwe elaboHlanga nguSihlalo wekomiti elibheke lo Mnyango eSishayamthetho sesifundazwe uNkk uMbali Frazer.
Engxoxweni leli phephandaba elibenayo noNkk uFrazer, uchaze ubumqoka balo Mnyango kuHulumeni nobudlelwano onabo neminye iminyango. “Lo Mnyango unemisebenzi emithathu esemqoka, owokuqala ukuhlinzeka iminyango kaHulumeni ngamahhovisi noma ngezindawo zokusebenzela,” usho kanje.
Enaba ngalokhu uthe umnyango othile udinga amahhovisi awuzifuneli kepha uthinta lo Mnyango kube yiwo owutholela indawo yokusebenzela.
Uthe okwesibili iwona lo Mnyango ophatha impahla kaHulumeni okungaba umhlaba, izakhiwo noma izimoto.
“Okwesithathu lo Mnyango ukhanda uphinde unakekele amabhizinisi noma izakhiwo zikaHulumeni. Ingakho unikwa imali ukuthi uthole inkampani ezokwenza umsebenzi ophathelene nokwakhiwa kwesakhiwo sikaHulumeni. Isibonelo nje uma kwakhiwa isikole noma isibhedlela uMnyango Wezemfundo noma Wezempilo awuzifuneli inkampani ezokwakha. Nanoma kunengxenye okumele ifakwe okungaba isesibhedlela kuba umsebenzi walo Mnyango,” kuchaza uNkk uFrazer.
Uthe yilo Mnyango okumele uqinisekise ukuthi izakhiwo zikaHulumeni zigcinekile. Echaza ukuthi lo Mnyango ukwenza kanjani lokho uthe: “Kusabelomali iminyango ngokwehlukana kwayo ithola imali kuthi uma isihlalile yenza indlela ezosebenza ngayo kulowo nyaka uma kukhona ofuna ukwakha isakhiwo ube usuthatha imali uyise eMnyangweni Wemisebenzi KaHulumeni kube yiwo oqala umsebenzi.”
Uveze ukuthi isabelomali salo Mnyango siba sincane kodwa yonke iminyango efuna ukwakhelwa ihambisa imali kuwo. Ube esengena kuzingqinamba lo Mnyango obhekene nazo athe usuqale uhlelo lokwakha inxanxathela yamahhovisi eminyango kaHulumeni wesifundazwe eMgungundlovu. Udalule ukuthi amahhovisi amaningi asetshenziswa uHulumeni njengaseMgungundlovu naseThekwini bawaqashile.
“Kule nxanxathela kuzoba neSishayamthetho. Iningi kakhulu imali emoshekayo kukhokhelwa omasitende. UMphathiswa okhona uzoqhubeka nomsebenzi owawuqalwe abangaphambilini,” usho kanje.
Uthe inhloso yalolu hlelo ukunqanda ukukhipha imali kukhokhelwa abanikazi bezakhiwo abaziqashile.
“Inkinga esibhekene nayo ngamahhovisi esiwasebenzisayo ukuthi aboHlanga banesabelo esincane kakhulu okuyinselelo enkulu. Izakhiwo ezikhona nezikhokhelwa izinkulungwane zemali ziphethwe ngamaNdiya nabelungu, badla izigidi zemali kaHulumeni ingakho sesithathe lesi sinqumo,” kusho uNkk uFrazer.
Uthe njengoba kuyisikhathi sokhuvethe izingqinamba abebehlangabezana nazo bezibhekene kakhulu noMnyango Wezempilo lapho bekufanele kwakhiwe izibhedlela ezibhekele ukhuvethe. “Siyikomiti laKwaZulu-Natal sijabule kakhulu ngomsebenzi owenziwe izisebenzi zoMnyango Wemisebenzi KaHulumeni ukubhekana nokusebenza ngaphansi kwengcindezi nokusebenza ngokuphuthuma. Sesibonile ukuthi izisebenzi zethu zikwazi kanjani ukusebenza uma sezizinikele emsebenzini eziwenzayo.”
Uthe beyikomiti bavakashele izibhedlela ezibhekelele ukhuvethe okuyiClairwood, iStanger neNgwelezane. Mayelana nokuthi ngabe lezi zibhedlela zizoqhubeka yini uma kuphela noma kudamba ukhuvethe uthe: “Onjiniyela bathi izakhiwo zalezi zibhedlela zingahlala imnyaka engaphezu kweli-12 kuya phezulu. Okwethu njengoMnyango ukuqinisekisa ukuthi uMnyango Wezempilo uyazinakekela ngoba sezisezandleni zawo, okwabo ukuthi emva kwesikhathi esithize baxhumane noMnyango Wemisebenzi KaHulumeni uzilungise uma kunesidingo.”
Uthe ubona ukuthi lezi zibhedlela zizoba wusizo ezweni njengoba kwenzeka ngezinkundla ezazakhelwe iNdebe YoMhlaba ngowezi-2010 njengoba iKwaZulu-Natal yasala ineMoses Mabhida Stadium.
UNkk uFrazer uthe okubajabulisile belikomiti ukuthi uMnyango usebenze ngokwethembeka njengoba kungabanga bikho nkohlakalo fthi wathola umbiko ongenalo ugcobho kuMcwaningimabhuku Omkhulu. Uthe ikomiti njengamanje libhekene nohlelo lwemisebenzi ekhishiwe kulungiswa izikole ezalimala okungaba ngenxa yezulu noma isichotho.
Abadayisi babhikishele umnikelo wamaNtaliyane
“Ikomiti liyaqinisekisa ukuthi imiphakathi ehlala eduze kwezikole ezakhiwayo iyaqashwa. Siyaqinisekisa ukuthi intsha nomama bayalithola ithuba lokuba ngosomathenda. Siqinisekisa ukuthi uMnyango uyayilandela yini imigudu. Inkinga esiba nayo eyosomabhizinisi abangazifaki izicelo zomsebenzi kodwa baqhamuke sebemisa imsebenzi sekukhona ohlomulile. Sicela benze okwenziwa yiwo wonke umuntu ukuze bangamisi imsebenzi ngoba lokho kubambezela isabelomali soMnyango, ngoba kusetshenzwa ngezikhathi kanti eminye imsebenzi yenziwa ngokubheka isimo sezulu,” kusho uNkk uFrazer.
Uqhube wathi ikomiti lake laqinisekisa ukuthi osonkontileka abafakwa ngaphansi kwezinkampani ezitole imisebenzi kuba abendawo kodwa uma bengakwazi ukwenza umsebenzi baqoka enye inkampani ngoba uma benza imisebenzi balawula imigomo.
“Ngithanda ukukhuthaza omama nentsha ukuba bangene ebhizinisini lokwakha ngoba amathuba akhona. Ngicela nemiphakathi ihloniphe abaqokelwe ukuba babalethele intuthuko nathi sizoqinisekisa ukuthi uMnyango uthinta labo okumele ubathinte,” kusho uNkk uFrazer.
Unxuse osonkontileka ukuba bakhokhele izisebenzi zabo ngesikhathi bangatholi imali bese bethenga izimoto ezibizayo bahlulwe nawukuqeda umsebenzi.
“Siyazi ukuthi lokhu bakwenza ngokungahloniphi izinhlaka abanazo njengokuthi kube nemeneja yomsebenzi. Lokhu kubiza ukuthi izikhulu zezinkampani zifundiseke kanjani nebhizinisi. UMnyango uyazenzisa izifundo zokulekelela ukulawula imali.”
Uphethe ngokuthi bafisa ukubona amabhizinisi aboHlanga ephumelela, abangosonkontileka beba kusigaba sesi-9 ngoba bafuna ukubabona befukula umnotho wesifundazwe.
“Lento ikhuluma nakulokhu esiqale ngakho kulaba abangomasitende. UMnyango usuqhamuke nomgomo ozokwenza ukuthi injinga yeNdiya ingakwazi ukuhlomula uma bengekho aboHlanga,” kusonga uNkk uFrazer.